१३ फाल्गुन २०७४ आइतबार Sunday, February 25, 2018
कांग्रेसभित्र तीव्र गुटबन्दी अन्त्यको माग गर्दै नेपाल विद्यार्थी संघ आबद्ध नेता, कार्यकर्ताले आइतबार केन्द्रीय कार्यालयमा केहीबेर धर्ना दिएका छन् । झन्डा, ब्यानरसहित बिहान करिब ९ बजे सानेपा कांग्रेस कार्यालय पुगेका नेवि संघका कार्यकर्ताले मूलढोकामा धर्ना दिँदै नाराबाजी समेत गरेका थिए ।
२० वर्ष पुरानो गाडी चढ्दै मुख्यमन्त्री
सरकारले दुई दशक पुराना सवारी साधन विस्थापित गर्ने नीति बनाएपनि प्रदेश १ का मुख्यमन्त्री शेरधन राई २० वर्ष पुरानो गाडी चढ्न बाध्य छन् ।
भारतीय अभिनेत्री श्रीदेवीको निधन भएको छ । ५५ वर्षीया श्रीदेवीको हृदयाघातका कारण दुबईमा निधन भएको हो ।
जमिन अभावले लुम्बिनी अञ्चल अस्पताललाई ३ सय बेडमा स्तरोन्नति गराउने गुरुयोजना अन्योलमा परेको छ । पर्याप्त पूर्वाधार निर्माण नहुँदा बिरामी साँघुरो र जोखिमयुक्त भवनमा उपचार सेवा लिन बाध्य छन् ।
नेपाली कांग्रेसले संसदीय दलको नेता चयनका लागि तीन सदस्यीय निर्वाचन समिति गठन गरेको छ । पार्टी केन्द्रीय कार्यालय सानेपामा आइतबार बिहान बसेको केन्द्रीय कार्यसमिति बैठकले नेता चिनकाजी श्रेष्ठको संयोजकत्वमा तीन सदस्यीय निर्वाचन समिति बनाउने निर्णय गरेको प्रवक्ता विश्वप्रकाश शर्माले जानकारी दिए ।
पटक पटक सर्दै आएको गोरखा फुजेलका कृष्ण अधिकारी हत्या सम्बन्धी मुद्दाको चितवन जिल्ला अदालतमा आइतबार पेसी तोकिएको छ ।
१५ वर्षपछि पुर्जा पाउँदाको खुसी
शीतगंगा नगरपालिका १४, पावराका ६४ वर्षीय भीमबहादुर बुढामगर १० वर्षपहिले बिरामीले थला परे । पित्त थैलीमा देखापरेको पत्थरीको उपचार गर्दा २ लाख रुपैयाँ खर्च भयो । त्यो पैसा गाउँलेसँग ऋण काढे । सावाँभन्दा ब्याज दोब्बर भयो । उपचार गर्न साथमा पैसा थिएन ।
हार्दिक बधाई, Sanis Dhungana! यस "शृंखला १: चाडपर्व" मा तपाईं विजयी हुनुभएको छ ।
हार्दिक बधाई, Kunwar Devendra! यस "शृंखला २: ताल" मा तपाईं विजयी हुनुभएको छ ।
हार्दिक बधाई, Anisha Mainali!यस "शृंखला ३: हिमाल" मा तपाईं विजयी हुनुभएको छ ।
शृंखला ४: व्यक्तित्व [फागुन १३ - १४]
तस्बिरमा देखाइएका व्यक्तित्व को हुन् ?
खाँदबारी नगरपालिका ३ का वडाध्यक्ष तोयानाथ ढुंगानाको आइतबार निधन भएको छ ।
मन्त्रिमण्डल विस्तारमा ढिलाइ
एमाले र माओवादी केन्द्रबीच मन्त्रालय संख्यामा कुरा नमिल्दा ११ दिनअघि गठित प्रदेश १ को मन्त्रिमण्डलले पूर्णता पाउन सकेको छैन ।
समस्यामा जुट उद्योग
झन्डै २० हजार मजदुरलाई प्रत्यक्ष रोजागारी दिँदै आएका जुट उद्योगले भारतको एन्टिडम्पिङ शुल्क र कच्चा जुटमा परनिर्भरताले समस्या भोग्दै आएका छन् । यहाँका उद्योगले भारत र बंगलादेशवाट कच्चा जुट आयात गरी उत्पादित ९५ प्रतिशत वस्तु भारतै निकासी गर्छन् ।
‘५ वर्षमा प्रदेश लोडसेडिङ मुक्त’
प्रदेश १ का मुख्यमन्त्री शेरधन राईले पाँच वर्षमा प्रदेश लोडसेडिङ मुक्त हुने दाबी गरेका छन् । यस अवधिमा पूर्वाधार विकास गरेर प्रतिवर्ष १० हजार पर्यटक भित्र्याउने उनले बताए ।
डुबान रोक्न बाँध बनाइने
वर्षाका बेला डुबानमा पर्दै आएको इटहरीलाई जोगाउन शेराखोलामा ३० लाखको बाँध निर्माण गरिने भएको छ । उपमहानगरको कार्यपालिका बैठक शुक्रबार शेराखोलाको किनारमा बसेर उक्त निर्णय गरेको हो ।
प्रमलाई मुख्यमन्त्रीको पत्र : ‘टेरेनन् संघीय कर्मचारीले’
मुख्यमन्त्री मोहम्मद लालबाबु राउतले प्रधानमन्त्री केपी ओलीलाई पत्र लेखेर संघीय कर्मचारीले प्रादेशिक काममा असहयोग गरिरहेको गुनासो गरेका छन् । प्रान्तीय सरकारको काममा अवरोध हुने गरी संघीय मन्त्रालयबाट आइरहेको निर्देशनबारे पनि मुख्यमन्त्री राउतले प्रधानमन्त्रीको ध्यानाकर्षण गराएका छन् ।
थला परेको गौर अस्पताल
बहुला कुकुरले टोकेर भ्याक्सिन (एआरभी) लगाउन शुक्रबार गौर अस्पताल पुगेका सरुअठाका जोगेन्द्र साहलाई त्यहाँका स्वास्थ्यकर्मीले फर्काइ दिए । कुकुरको भ्याक्सिन नभएकाले सेवा बन्द गरिएको सूचना पढेर साह निरास हुँदै फर्किए ।
ब्लेडले सर्छ प्राणघातक रोग
मोतिया र जलविन्दुका बिरामीको आखाँको शल्यक्रिया गर्दा प्राणघातक रोग सरेको खुलेको छ । वीरगन्जको आँखा अस्पतालमा शल्यक्रिया भइसकेका ३६ जना बिरामीको स्वास्थ्य जाँच्दा प्राणघातक रोग भेटिएको हो ।
तस्करी रोक्न विशेष अप्रेसन
सीमा नाकामा तस्करी मौलाएपछि सप्तरी प्रहरीले विशेष अप्रेसन थालेको छ । चाइनिज स्याउ भारत तस्करी हुने मुख्य नाका बनेपछि सप्तरीको सीमा क्षेत्रमा प्रहरीले अप्रेसन तीव्र पारेको हो ।
सवारीमा सकिँदै विकास बजेट
पर्साको कालिकामाई गाउँपालिकाको बोर्ड बैठकले उपप्रमुख र कार्यकारी अधिकृतका लागि थप दुइटा गाडी भाडामा लिने निर्णय गर्‍यो । यसअघि मासिक ८० हजार भाडामा लिइएको गाडी गाउँपालिका अध्यक्षले प्रयोग गरिरहेका छन् । वडाध्यक्षका लागि ५ वटा मोटरसाइकल खरिद गरिसकिएको छ । अरू दुइटा मोटरसाइकल किन्न प्रक्रिया थालिएको छ ।
सहकारी अनुगमन गर्न माग
सहकारी डिभिजन कार्यालयहरूले गर्दै आएको सहकारी दर्ता, अनुगमन, खारेज, दण्डजस्ता कामहरू अब स्थानीय तहबाट हुने भएको छ ।
स्वास्थ्य संस्थाको सेवा विस्तार
स्थास्थ्य चौकीहरू स्थानीय तहको मातहत रहेपछि ग्रामीण भेगका सेवाग्राहीले नियमित स्वास्थ्य सेवा पाउन थालेका छन् ।
धादिङमा छुट्टाछुट्टै सवारी दुर्घटनामा दुई जनाको मृत्यु, ३ जना घाइते
छुट्टाछुट्टै सवारी दुर्घटनामा दुई जनाको मृत्यु भएको छ । एक जना घाइते भएका छन् । धादिङको गजुरी–१ कालिका मन्दिर नजिकै ट्रकले मोटरसाइकललाई ठक्कर दिँदा एक जनाको घटनास्थलमै मृत्यु भएको गजुरी प्रहरीले जानकारी दिएको छ ।
आकाश बादलले ढाकेको छ । जाडोले कठयांग्रिँदै कक्षाकोठामा पढ्न बसिरहेकी छन् अस्मिता चेपाङ । आङमा स्वेटर, ज्याकेट केही छैन । पातलो विद्यालय पोसाकमा पढ्न आएकी उनी बाँसले निर्माण गरिएको टहराभित्रको कक्षा कोठामा छन् । टहराको बाँस मक्किएर भाँचिइसकेको छ ।
नागरिकका आवेदन प्रदेशसभा प्रस्ताव हुने
प्रदेशसभा ३ ले संसदीय व्यवस्थामा नौलो अभ्यासअनुरुप नागरिकका ‘आवेदन’ लाई पनि प्रदेशसभाका ‘प्रस्ताव’ बनाउने मस्यौदामा उल्लेख गरेको छ । नियमावली मस्यौदा गर्न गठित समितिले संसद्मा नागरिकले पनि ‘आवेदन पत्र पेस गर्न सक्ने’ प्रस्ताव पेश गरेको हो । संसदबाट पारित भएपछि मात्रै यो व्यवस्था लागु हुनेछ ।
कर्मचारीद्वारा आन्दोलनको चेतावनी
भरतपुर महानगर क्षेत्रमा खानेपानी वितरण गर्दै आएको भरतपुर खानेपानी व्यवस्थापन बोर्डका कर्मचारीले तलब तथा सेवा सुविधा वृद्धि नगरे आन्दोलन गर्ने चेतावनी दिएका छन् ।
भूकम्पपीडितको घर बन्यो
भूकम्पले गोरखा जिल्ला सीमानाको कोल्कीका अधिकांश घर ढलेका थिए । नढलेका पनि चिराचिरा परेर बस्नै नमिल्ने भएका थिए । पुरानो ओतबाट विस्थापितहरू अब भने घर बनेपछि खुसी छन् ।
पहाडमा झोलुंगेपुल: कतै प्रयोगविहीन, कतै नभएर सास्ती
सदरमुकाम कुश्मालाई ज्ञाँदी क्षेत्रसँग जोड्नेगरी ३ सय ४४ मिटर लामो आकाशे पुल बनेपछि मोदीवेणीका तीनवटा झोलुंगे पुलबाट सर्वसाधारण आउजाउ गर्न छाडेका छन् ।
स्वस्थकर भन्दै गुणस्तरहीन नुन
आयोडिनयुक्त नुन प्रतिकेजी बढीमा २० रुपैयाँमा पाइन्छ । ढुवानी खर्च जोडेर पनि ग्रामीण स्थानमा पुग्दा बढीमा २५ रुपैयाँ पर्छ । तर, आयोडिनरहित नुन प्रतिकेजी १ सय २५ रुपैयाँमा बिक्री भइरहेको भेटिएको छ ।
जनता आवास कार्यक्रममार्फत सञ्चालन भएको विपन्न परिवारका लागि घर निर्माण कार्यक्रम बजेट अभावले अधुरै भएको छ । दुई वर्षअघि शेरबहादुर देउवा सरकारका सहरी विकासमन्त्री अर्जुननरसिंह केसीले ल्याएको ‘जनता आवास’ कार्यक्रममार्फत पर्वतका तत्कालीन १० गाविसका सय विपन्न परिवारका लागि घर बनाइदिने योजना अघि सारिएको थियो ।
बेलायतका नेपालीले दिए एम्बुलेन्स
बेलायतमा बसोबास गर्दै आएका इलमपोखरी, राइनास मोहोरियाकोट, गौंडालगायत क्षेत्रमा मूल घर रहेका प्रवासी नेपालीले गाउँमा एम्बुलेन्स सहयोग गरेका छन् ।
जोखिम मोल्दै अझै तुइन
ऋषिङ गाउँपालिका १ तल्लो सेताङकी ५० वर्षीया टीकामाया राना हप्ताको दुईपटक सदरमुकाम दमौली झर्छिन् । नझरे चुलो बल्दैन, झर्दा बाटो जहिल्यै तुइन यात्रा गरेर मात्रै आउजाउ गर्नुपर्छ ।
बजेट अभाव भएपछि पश्चिम नवलपरासीको आर्सेनिक प्रभावित क्षेत्रमा निर्माणाधीन ठूला खानेपानी आयोजना अलपत्र परेका छन् । २ वर्षअघि सुरु भएका आयोजनाअन्तर्गत डिप बोरिङबाहेक अन्य काम भएका छैनन् ।
तयारी नहुँदा संसद् बैठक स्थगित
सरकारले बिजनेस नदिएपछि प्रदेश ५ को संसद्को चौथो बैठक लामो समयका लागि स्थगित गरिएको छ ।आइतबारका लागि तोकिएको बैठकमा छलफलका लागि विषयवस्तु नभएपछि फागुन २७ सम्मका लागि सारिएको हो ।
सुनुवाइ गर्ने इजलास छैन
स्थानीय सरकारका न्यायिक समितिमा विवाद आउने क्रम सुरु भएको छ । तर सुनुवाइका लागि इजलास छैन । विवादको सुनुवाइ गर्न इजलास नहुँदा न्यायिक समितिले गति लिन सकेको छैन ।
नयाँ शक्तिको एक वर्षभित्र महाधिवेशन, पार्टीको नाम परिवर्तन गरिने
नयाँ शक्ति पार्टीले आगामी एक वर्षभित्र महाधिवेशन गर्ने भएको छ । लुम्बिनीमा बसेको पार्टीको संघीय परिषद्‍को चौथो विस्तारित बैठकले महाधिवेशन गर्ने र त्यसबाट पार्टीको नाम परिवर्तन गर्ने निर्णय गरेको हो ।
सेनाको गाडीमा हात्ती आक्रमण
हात्ती धपाउन निस्केको सेनाकाे जिपमा क्षति भएको छ । बर्दिया राष्ट्रिय निकुञ्जको मध्यवर्ती क्षेत्रको अम्रेनी गाउँमा हात्ती धपाउन पसेको भे १ झ २३७ नम्बरको बलेरो जिपमाथि हात्तीले आक्रमण गरेपछि क्षाति भएको हो ।
न्यायिक समितिमा अन्योल
बारेकोट गाउँपालिकाकी उपाध्यक्ष ओमा शाहीलाई ‘न्याय कसरी निरूपण गर्ने’ भन्ने पिरलो छ । न्याय समितिकी संयोजक शाही स्थानीय तहमा आएका विवाद समाधानको कार्यविधिको खोजीमा छिन् ।
डढेलोमा परी तीन महिला गम्भीर
त्रिपुरासुन्दरी नगरपालिका ५ कागुत्तास्थित सामुदायिक वनमा लागेको डढेलोमा परी तीन महिला गम्भीर घाइते भएका छन् । जिल्लामा उपचार हुन नसकेपछि उनीहरूलाई थप उपचारका लागि सुर्खेत रेफर गरिएको छ ।
महिलाले मनाए चैतलो मेला
सदरमुकाम सिमकोट र आसपासका महिलाले शनिबार चैतलो मेला मनाएका छन् । महिला स्थानीय वेशभूषामा सिँगारिएर नाच्दै र गाउँदै चैतलो मेला मनाएका हुन् ।
डढेलोमा परी ३ महिला गम्भीर घाइते
भोज खाएर घर फर्कंदै गरेको बेला डढेलोमा परी ३ जना महिला गम्भीर घाइते भएका छन् । उनीहरुलाई उपचारका लागि सुर्खेत लगिएको छ ।
प्रदेशसभाको बैठकले ६ नं प्रदेशलाई ‘कर्णाली प्रदेश’ नामाङ्कन गरेको छ । प्रदेशसभाको शनिबार बसेको बैठकमा प्रदेशसभा सदस्यको बहुमतबाट ६ नं प्रदेशको नाम ‘कर्णाली प्रदेश’ पारित गरेको हो ।
प्रदेश र राजधानी प्रस्ताव
प्रदेश–६ को नामकरण र राजधानीको टुंगो प्रदेशसभाको शनिबार बस्ने बैठकले लगाउने भएको छ । अन्य प्रदेशमा नाम र राजधानीको विषय निकै पेचिलो बनिरहेका बेला यहाँको प्रदेशसभाले भने सर्वसम्मत रूपमा प्रस्ताव पारित गर्ने तयारी गरेको छ ।
ठूला आयोजनाले देशमै रोजगारी
कैलाली बल्चौरका रामबहादुर र रंगा नेपाली श्रीमान/श्रीमती हुन् । दुवैजना अत्तरिया देखि धनगढी सम्म निर्माणाधीन ६ लेन सडकमा मजदुरी गरेर दैनिक हजार कमाउछन् । ‘महिनाभर काम पाएका बेला ३० हजार जति कमाई हुन्छ’ रंगाले भनिन् ‘घरखर्च कटाएर करिब १० हजार बच्छ ।’
‘पहिलो प्राथमिकता औद्योगिक क्षेत्र’
मुख्यमन्त्री त्रिलोचन भट्टले औद्योगिकरणविना विकास सम्भव नभएकाले औद्योगिक क्षेत्र निर्माण सरकारको पहिलो प्राथमिकतामा भएको बताएका छन् ।
मानव बेचविखनमुक्त प्रदेश बनाउने प्रतिबद्धता
मुख्यमन्त्री त्रिलोचन भट्टले प्रदेशलाई मानव बेचविखनमुक्त बनाउने प्रतिबद्धता जनाएका छन् । उनले मानव बेचविखनजस्तो अपराध रोक्न कडा खालको कानुन बनाएर कार्यान्वयनमा समेत कडाइ गरिने बताए ।
कालो झण्डा प्रदर्शन आरोपमा ५ पक्राउ
प्रदेश मन्त्रिपरिषद्मा दलित मन्त्री समावेस नगरेको भन्दै दलित विद्यार्थी साझा मञ्चका विद्यार्थीले शनिबार महेन्द्रनगरमा प्रदर्शन गरेका छन् । मुख्यमन्त्री त्रिलोचन भट्ट फर्कनेक्रममा उनीहरूले प्रदर्शन गरेका हुन् ।
होटलमै मन्त्रालय !
झन्डावाल गाडी, सशस्त्र प्रहरीको सुरक्षाघेरा । प्रदेश सरकारका मन्त्रीहरूको चहलपहल बढेको–बढयै छ । भेटघाट तथा बधाई दिन आउने नातागोता, पार्टी कार्यकर्ता, व्यवसायी, कर्मचारीलगायतको ओइरो पनि उत्तिकै ।
कैलालीको जंगल क्षेत्र संकटमा
कैलालीमा रहेको देशको सबैभन्दा ठूलो जंगल क्षेत्र संकटमा परेको भन्दै प्रदेश ७ का मन्त्री, सांसद र संरक्षणकर्मीहरूले जोगाउन नयाँ नीति निर्माण गरी कार्यान्वयन हुनपर्ने बताएका छन् ।
जनसंख्या तथा वातावरण मन्त्री लालबाबु पण्डितको निर्देशनमा मापदण्डविपरीतका होटललाई जरिवाना गरिएको छ ।
नेपाली कांग्रेस केन्द्रीय कार्यसमितिको बैठक पार्टी केन्द्रीय कार्यालय सानेपामा जारी छ । आइतबार करिब पौने ११ बजे सुरु केन्द्रीय समिति बैठकले पार्टीको संसदीय दलको विधान पारित गरी संसदीय दलको नेता चयन प्रक्रिया अघि बढाउने पार्टी प्रवक्ता विश्व प्रकाश शर्माले जानकारी दिए ।
सपना देख्न छाड्दैनन् आनन्दकुमार
नेपाली जनसम्पर्क समिति बेल्जियमले बम आक्रमणमा घाइते भएकी नेपाल विद्यार्थी संघकी केन्द्रीय सदस्य मीरा कटुवाललाई आर्थिक सहयोग प्रदान गरेको छ ।
लुइस स्वारेजको ह्याट्रिक र फिलिपे कोउटिन्होको उत्कृष्ट पहिलो लिग गोलको मदतले बार्सिलोनाले स्पेनी ला लिगमा शनिबार राति गिरोनालाई ६–१ ले हरायो र शीर्ष स्थानमा दस अंकको अग्रता खोलेको छ ।
मोहम्मद सलाहले लगातार छैटौं खेलमा गोल गरेपछि लिरभपुलले इंग्लिस प्रिमियर लिगमा शनिबार राति वेस्ट ह्यामलाई ४–० ले हरायो । एनफिल्डमा प्राप्त यस जितपछि लिभरपुल लिग तालिकाको दोस्रो स्थानमा उक्लेको छ ।
त्रिभुवन आर्मी क्लबले प्रतिस्पर्धात्मक फाइनलमा पश्चिमाञ्चललाई ३–१ ले हराउँदै लगातार तेस्रोपटक प्रधानसेनापति राष्ट्रिय पुरुष भलिबल प्रतियोगिताको उपाधि जितेको छ ।
डिफेन्डिङ च्याम्पियन सीएमजी क्लब संकटालाई ३–२ ले पराजित गर्दै एपीएफ शनिबार नारायणगढमा जारी १३ औं विकास रनिङ सिल्डको सेमिफाइनलमा प्रवेश गरेको छ ।
प्रधानमन्त्री कप महिला राष्ट्रिय क्रिकेट प्रतियोगिताको उपाधि भिडन्तमा विभागीय टोली एपीएफ र पूर्वाञ्चलका बीच प्रतिस्पर्धा हुने भएको छ ।
नायिका पूर्णिमा लामाको निर्माण रहेको फिल्म ‘हिरोज’ चैत २३ देखि देशव्यापी प्रदर्शनमा आउने भएको छ । एनबी महर्जनको निर्देशन रहेको उक्त फिल्मले बेरोजगारीको पीडा, महिला हिंसा, राजनैतिक विकृति, अन्यायविरुद्धको आवाजका साथै प्रेमकथा प्रस्तुत गरेको बताइन्छ ।
पवित्रा खड्का समसामयिक नेपाली रंगमञ्चमा चिनिएकी नाम हुन्। उनले थुप्रै नाटकमा अभिनय मात्र गरेकी छैन, ‘भृकुटी’ मार्फत निर्देशनको अनुभव पनि बटुलिसकेकी छन्।
कथाकार शरण राई नयाँ कथासंग्रहहित आएका छन्। ‘अन्तिम आयाम’ विराटनगरमा बिहीबार प्रदेश १ का प्रमुख डा. गोबिन्दबहादुर तुम्बाहाङले लोकार्पण गरे।
हलिउडका स्टाइलिस्ट हिरोइनमध्ये पर्छिन्— जेनिफर लरेन्स। उनको ड्रेसअप र फेसन सेन्सको प्राय: प्रशंसा हुने गर्छ।
देशमा विद्यमान भ्रम हत्या अर्थात् गर्भपतन विरुद्ध आवाज उठाउने शैलीको एउटा गीतको म्युजिक भिडियो सार्वजनिक भएको छ । १३ वर्षीया किशोरी गायिका प्रेगिशा पौडेलको स्वरमा तयार पारिएको ‘नमार मलाई, नफाल मलाई..’ गीतको म्युजिक भिडियोमा कुमारी अवस्थामै गर्भवती भएकी एउटी किशोरीको गर्भमा रहेको शिशुको बाँच्ने चाहनालाई व्यक्त गरिएको छ ।
नवलपरासीमा कुष्ठरोगका ८८ जना नयाँ विरामीहरु फेला परेका छन् । जिल्ला जनस्वास्थ्य कार्यालय नवलपारसीले जिल्लाका १२ वटै स्थानीय तहमा गरेको ‘सर्च अभियान’ मा यतिको संख्यामा विरामीहरु फेला परेका हुन् ।
नर्भिक अस्पतालको लापरबाही : देब्रे घुँडा शल्यक्रिया गर्नुपर्ने दाहिने खुट्टा चिरिदिए
थापाथलिस्थित नर्भिक अस्पतालले उपचारमा गम्भीर लापरबाही गरेको पाइएको छ । अस्पतालले देब्रे घुँडाको शल्यक्रिया गर्नुपर्ने एक बिरामीको दाहिने खुट्टा चिरिदिएको छ । स्कुटी थन्काउँदा चिप्लिएर खुट्टाको लिगामेन्ट च्यातिएका कारण शुक्रबार अस्पताल भर्ना भएकी बिन्दु पौडेलको उपचारमा अस्पतालले लापरबाही गरेको हो ।
मुटु रोग विशेषज्ञ डा. ओममूर्ति अनिल आफूकहाँ मुटु रोग उपचारका लागि आउने धेरैजसो बिरामीलाई नियमित साइकल चलाउने सल्लाह दिन्छन् । उनी साइकल चलाउनुलाई ‘काममै व्यायाम’ बताउँछन् ।
अफगानिस्तानमा शनिबार गराइएका छुट्टाछुट्टै आक्रमणमा कम्तीमा २७ सुरक्षाकर्मी मारिएका छन् । अधिकारीका अनुसार मारिनेमध्ये अधिकांश सैनिक छन् ।
युरोपेली संघका सदस्य राष्ट्रबाट बेलयात आउने मानिसको संख्या घटेको छ । बेलायतको तथ्यांक संकलन गर्ने निकाय ‘अफिस फर नेसनल स्टाटिसटिक्स’ ले युरोपेली संघबाट बेलायत आउनेको संख्या वर्षको एक लाखभन्दा कममा झरेको जनाएको छ । यो गत ५ वर्षयताकै कम हो ।
भारतको केरला राज्य स्थित पलक्कड जिल्लामा एक आदिवासी युवाको हत्या गरेको अभियागमा प्रहरीले दुई जनालाई पक्राउ गरेको छ । हत्या गर्नुअघि सामाजिक सञ्जालमा सेल्फी खिचेर पोष्ट गरेपछि प्रहरीले उनीहरुलाई पक्राउ गरेको हो ।
अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रम्पकी छोरी इभांका ट्रम्प दक्षिण कोरियामा जारी हिउँदे ओलम्पिकको समापन समारोहमा सहभागी हुन शुक्रबार सोल पुगेकी छन् । उनी ओलम्पिक समापन समारोहमा उपस्थित हुने अमेरिकी प्रतिनिधिमण्डलको नेतृत्व गर्दै सोल पुगेकी हुन् ।
अष्ट्रेलियाका उपप्रधानमन्त्री बार्नबी जोयसले आफ्नो पदबाट राजीनामा दिएका छन् । उनले नेशनल पार्टीको नेताबाट समेत राजीनामा दिएका छन् ।
नेपाली ललितकला पत्रकारितामा योगदान पुर्‍याएका वरिष्ठ चित्रकार तथा कला लेखक गेहेन्द्रमान अमात्य ‘सोफाज–वरिष्ठ पत्रकारिता पुरस्कार’ बाट सम्मानित भएका छन् ।
अंग्रेजी वर्ष २०१८ शुरु भएदेखि नयाँ–नयाँ प्रविधि र उत्पादनहरुको खुबै चर्चा हुने गरेको छ । त्यस्ता उत्पादनहरुमध्ये मध्ये क्यामेरा पनि एक हो ।
धपक्क बल्यो कम्बोडियाली मन्दिर [फोटोफिचर]
बुद्धजन्मस्थल लुम्बिनीकै निक्कै आकर्षक र मनमोहक कम्बोडिया मोनास्ट्री सञ्चालन हुने भएको छ ।८ वर्ष लगाएर बनाइएको कम्बोडियाको कला संस्कृति झल्कने मोनास्ट्री फागुन १५ गते उद्घाटन भएपछि विधिवत् सञ्चालनमा आउने छ । मोनास्ट्रीको उद्घाटन त्यहाँका प्रधानमन्त्री हुन सेनको प्रतिनिधित्व गर्दै उनका दाजु तथा नेशनल एसम्बलीका सदस्य (सांसद) हुन यङ्गले गर्नेछन् । मोनास्ट्रीमा फागुन १४ देखि १६ सम्म विशेष पूजा आयोजना गरिएको छ ।
महिला स्वास्थ्यका विषयमा सचेतना बढाउन काठमाडौंमा शनिबार दोस्रो ‘पिंकाथन’ महिला दौड सम्पन्न भएको छ । गतवर्षबाट नेपालमा सुरु भएको पिंकाथन दौडमा २ हजार भन्दा बढी महिलाले भाग लिएका नेपालस्थित आयोजक लेजर पोर्टका नमराज जोशीले बताए ।
रंगहरुको पर्व होली सुरु भएको संकेत स्वरुप शुक्रबार उपत्यकाको वसन्तपुरमा विधिवत रुपमा चीर (लिंगो) गाडिएको छ ।
मिथिला माध्यमिकी परिक्रमामा रहेकाहरुले कञ्चनवनमा रंग अबिर दलेर होली मनाएका छन् ।महोत्तरीको मडैबाट बिहीबार कञ्चनवन आइपुगेका परिक्रमा यात्रुहरुले होरी गाउँदै रंग अबिर दलेर होली मनाएका हुन् ।
साम्यवादी नजरमा नेपालको इतिहास
पुष्पलालले लेख्न थालेको नेपालको इतिहासमा तथ्यमा गल्ती सितिमिति भेट्टिँदैनन् । तर पछिल्ला नेपाली साम्यवादीहरूले विदेशी माक्र्सवादी ऐतिहासिकहरूको परोक्ष वा प्रत्यक्ष प्रभावमा लेखेका नेपालको इतिहासका पुस्तक विद्वज्जनग्राह्य छैनन् । ...
ठमाडौंमा बर्सेनि विभिन्न थिममा रोबोटिक्स प्रतिस्पर्धा आयोजना हुन थालेका छन् र हरेक प्रतियोगिताका थिमले नयाँ–नयाँ समस्या समाधान गर्ने रोबोट बनाउने उद्देश्य राखेका हुन्छन्।
पढ्ने ठाउँ कस्तो ?
सानो, मीठो, शान्त, सुगन्धी, अनुपम, बस ! मेरा निमित्त त्यही हो नेपाल ! यहाँ वाग्नर कोदाली खनिरहेछन् । शेक्सपियर हलो जोत्दा हुन् । टिसियन र टर्नर भेडा चराउँदा हुन् । ...